NASA dia mahazo ny sary voalohany amin'ny lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika | Meteorolojia tambajotra
Sarin'ny lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika
Portillo Alemanina | 16/05/2022 12:00 | astronomia
Telo taona lasa izay, nanaitra an'izao tontolo izao ny vondrom-piarahamonina siantifika ao amin'ny Event Horizon Telescope (EHT) tamin'ny sary voalohany misy lavaka mainty nalaina tao amin'ny vahindanitra M87 mifanila aminy. Ankehitriny, ity ekipa ity dia sambany naneho porofo mivantana momba ny miaraka amin'ny sary voalohany amin'ny lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika, mampiasa fandinihana avy amin'ny tambajotran'ny teleskaopy radio maneran-tany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba nahazoana sarin'ny loaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika ary inona no vokany.
1 Makà sarin'ny loaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika
2 porofo hita maso voalohany
3 Loka mainty roa mitovy
Makà sarin'ny loaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika
Ity no Sagittarius A*, loharano taratra miovaova be izay miova tsy tapaka. Nampiasa algorithm nandritra ny taona maro ny mpahay siansa mba hanamboarana ny fivoarany rehefa mandeha ny fotoana, toy ny hoe "sarimihetsika" izy io. Nahomby izy ireo izao ary namoaka ny sariny.
Ho fanampin'ny andian-taratasy navoaka tao amin'ny andiany manokana The Astrophysical Journal Letters, ny Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration Team dia nanambara ny zava-bita androany tamin'ny andiana valan-dresaka iraisam-pirenena niara-niasa manerana izao tontolo izao.
"Ity no sary voalohany an'i Sagittarius A*, ilay lavaka mainty lehibe eo afovoan'ny Milky Way, izay 4 tapitrisa heny mahery noho ny Masoandro. Izahay dia manome porofo mivantana voalohany momba ny fisian'izy ireo, "hoy i Sara Issaoun, Harvard Astrophysicist A Center Research Fellow, niteny tao amin'ny foiben'ny European Southern Observatory (ESO) any Munich, Alemaina.
Ny valiny dia nanome porofo be dia be fa lavaka mainty ilay zavatra ary nanome fanazavana sarobidy momba ny fiasan'ireo kintana goavam-be ireo, izay heverina fa eo afovoan'ny ankamaroan'ny vahindanitra.
Araka ny filazan'ny mpahay siansa 300 mahery avy amin'ny foibe 80 tafiditra amin'ny fikarohana, ny lavaka goavam-be dia "mandanja" eo amin'ny 4 tapitrisa mason'ny masoandro, any amin'ny faritra tsy lehibe noho ny rafi-masoandro misy antsika. 27.000 XNUMX taona hazavana avy amin'ny planetantsika. Raha ny fomba fijerintsika dia mitovy habe amin'ny donut amin'ny volana eny amin'ny lanitra izy io.
porofo hita maso voalohany
Ny sary dia fijery efa nandrasana hatry ny ela momba ilay zavatra goavana eo afovoan'ny vahindanitra misy antsika. Hitan’ny mpahay siansa kintana mihodidina zavatra midadasika, mikisaka, tsy hita maso eo afovoan'ny Voie lactée. Midika izany fa lavaka mainty ny vatana selestialy Sadge A*.
Na dia tsy hitanay aza ilay lavaka mainty satria maizina tanteraka, dia mampiseho endri-javatra miavaka ny entona mamirapiratra manodidina azy: faritra afovoany maizina (antsoina hoe aloka) voahodidin'ny rafitra peratra mamirapiratra. Ny fijery vaovao dia maka hazavana miondrika amin'ny herin'ny lavaka mainty.
"Gaga izahay fa ny haben'ny peratra dia nifanaraka tsara tamin'ny vinavinan'ny teorian'ny relativity ankapoben'i Einstein", hoy i Geoffrey Bower, lehiben'ny mpahay siansa amin'ny tetikasa EHT ao amin'ny Institute for Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taipei. "Ireo fandinihana tsy mbola nisy hatrizay ireo dia manatsara ny fahatakarantsika ny zava-mitranga eo afovoan'ny vahindanitra misy antsika manome fomba fijery vaovao momba ny fifandraisan'ny lavaka mainty goavam-be amin'ny tontolo iainany".
Ny fijerena zavatra lavitra toy izany dia mitaky teleskaopy miendrika tany, na dia saika na mitovy aza, ary izany no azon'ny EHT. Izy io dia ahitana teleskaopy radio valo any Chile, Etazonia, Meksika, Espaina ary ny Tendrontany Atsimo. Any Etazonia, tantanin'ny European Southern Observatory (ESO) sy ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena hafa any amin'ny tany efitra Atacama any Chile, any Eoropa dia misongadina ny Institute for Millimetric Radio Astronomy (IRAM) any Sierra Nevada (Granada).
Ny EHT dia nandinika ny Sagittarius A* nandritra ny alina maromaro nisesy, nanangona angon-drakitra nandritra ny ora maro, mitovy amin'ny fampiasana fakantsary lava amin'ny fakantsary. Anisan'ireo teleskaopy radio mandrafitra ny EHT, ny antenne IRAM an'ny Ny halavan'ny 30 metatra dia nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fandinihana, ahafahana mahazo ny sary voalohany.
Amin'ny alalan'ny teknika antsoina hoe interferométrie reference lava be (VLBI, izay mampiasa asa matematika fa tsy lens), dia natambatra ny famantarana avy amin'ny teleskaopy radio rehetra ary nokarakarain'ny algorithms sy supercomputers ny angonany mba hanamboarana ny sary tsara indrindra.
Nanampy toy izao i Thalia Traianou, mpikaroka ao amin’ny Institut Andalusia momba ny Astrofizika (IAA-CSIC): “Ny teknôlôjia dia ahafahantsika mahazo sary vaovao misy lavaka mainty sy sarimihetsika mihitsy aza.”
Loka mainty roa mitovy
Mikasika ny sarin'ny loaka mainty ao amin'ny vahindanitra M87 nalaina tamin'ny taona 2019, dia manaiky ny mpahay siansa fa tena mitovy ireo loaka mainty roa ireo, na dia ny loaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika aza. Izy io dia avo 1000 heny noho ny kely kokoa ary kely kokoa noho ny M87*, izay 55 tapitrisa taona hazavana miala.. Ny kintana goavam-be dia manana masoandro 6.500 lavitrisa ary 9.000 lavitrisa kilometatra ny savaivony, izany hoe ny rafi-masoandro hatrany Neptune no hiditra ao.
"Manana karazana vahindanitra roa samy hafa tanteraka izahay ary misy lavaka mainty roa samy hafa be, fa eo akaikin'ny sisin'ireo lavaka mainty ireo, dia mitovy ny fijery azy ireo," hoy i Sera Markoff, filoha mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Komitin'ny Siansa EHT ary mpampianatra momba ny astrofizika teorika. ao amin'ny Oniversiten'i Amsterdam. Izany dia milaza amintsika fa ny relativité ankapobe no mifehy an'ireo zavatra ireo akaiky, ary ny fahasamihafana rehetra hitantsika lavitra dia noho ny fahasamihafan'ny raharaha manodidina ny lavaka mainty. »
Toy izany no nanazavan'i Roberto Emparan, mpahay fizika teorika ary mpampianatra ICREA ao amin'ny Institute of Cosmology of the University of Barcelona, ​​​​amin'ny SMC Spain: "Amin'izao fotoana izao dia afaka milaza isika fa ny fitoviana misy eo amin'ny sarin'ny M87 * avy amin'ny 2019 sy ny sary ankehitriny dia avy amin'ny SgrA * izay mampiseho fa, na inona na inona haben'ny lavaka mainty, ny tontolo iainana akaiky indrindra amin'ny lavaka mainty dia mitovy. Ny fandinihana amin'ny ho avy dia hilaza amintsika bebe kokoa momba ny fananan'ilay raharaha manodidina ny lavaka mainty, ary mety ho azontsika fantarina raha tena ilay zavatra novinavinain'ny teorian'i Einstein, sa 'mpisandoka' na 'copycat' hafakely kokoa."
Gonzalo J. Olmo, mpampianatra ao amin'ny Departemantan'ny Fizika Teoretika sy IFIC ao amin'ny Foiben'ny Hybrid ao amin'ny Oniversiten'i Valencia sy ny CSIC, ary Diego Rubiera-García, mpikaroka talenta ao amin'ny Departemantan'ny Fizika Teoretika ao amin'ny Oniversite Complutense ao Madrid. "Na dia avo arivo heny noho ny zavatra hita amin'izao fotoana izao ao amin'ny Voie lactée aza io zavatra io, ny fitoviany amin'ny lavaka mainty 'kely' dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny fizika mamaritra ireo zavatra ireo", hoy izy ireo nanantitrantitra ny SMC Espaina.
Na izany aza, sarotra lavitra noho ny M87* ny vokatra ankehitriny, na dia akaiky kokoa aza ny Sagittarius A*. Tsy maintsy namolavola fitaovana vaovao be pitsiny ny ekipa mba hanazavana ny fihetsiky ny entona manodidina ny Sgr A*. Raha ny M87* dia lens tsotra sy marin-toerana kokoa, saika mitovy ny sary rehetra, ny Sgr A* dia tsy.
"Ny entona eo akaikin'ny lavaka mainty dia mihetsika amin'ny hafainganam-pandeha mitovy, saika haingana toy ny hazavana, akaikin'ny Sagittarius A* sy M87*", hoy ny fanazavan'ny mpahay siansa EHT Chi-kwan Chan ao amin'ny Steward Observatory sy ny Departemantan'ny Astronomy sy Data. Anjerimanontolon'i Arizona, raha maharitra andro na herinandro maromaro ny entona mba hanodina ny M87* lehibe kokoa, ny Sagittarius A* kely kokoa dia mamita orbit ao anatin'ny minitra.
"Midika izany fa ny famirapiratana sy ny endriky ny entona manodidina an'i Sagittarius A* dia miova haingana rehefa miara-miasa amin'ny fandinihana azy ny EHT: ohatran'ny mitady sary mazava ny puppy manenjika ny rambonyhoy hatrany izy.
Ny sarin'ny lavaka mainty Sgr A* dia salan'isa amin'ireo sary samy hafa nalain'ny ekipa, ary farany dia nanambara voalohany ilay kintana goavambe eo afovoan'ny Voie lactée.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo sary nalaina tamin'ny lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » Sarin'ny lavaka mainty ao amin'ny vahindanitra misy antsika
inona no meridiana
Ahoana ny feon'ny lavaka mainty?